Jabra Elite 75t, famakafakana vokatra tena boribory | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 27/03/2021 15:00 | Gadgets, hevitra
Manohy izahay Rehefa mandinika vokatra audio, indrindra ny headphones TWS amin'ireo marika mifanohitra indrindra mba hanomezana safidy hafa eo ambony latabatra sy hanamorana ny safidin'ny vokatra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao sy ny toekarenao, ary amin'izany filaharana izany dia misy headphones vaovao tonga eo amin'ny latabatray. fanadihadiana.
Miresaka momba ny iray amin'ireo vokatra matotra indrindra an'i Jabra izahay, ny headphones Elite 75t, mahita ny fanadihadianay lalina miaraka amin'ny horonantsary sy ny famahanana unboxing amin'ny antsipiriany. Lazainay aminao ny zavatra niainantsika ary raha mendrika ny mividy ireo headphones TWS efa noresahina be ireo.
Toy ny tamin'ny fotoana maro hafa, izahay dia misy horonantsary eo an-tampony hahafahanao mankasitraka ilay unboxing, ny fahafaha-manamboatra azy ary mazava ho azy ny antsipiriany rehetra momba ny famakafakana lalim-paka ny vokatra, noho izany dia mamporisika anao izahay hijery akaiky alohan'ny na aorian'ny famakiana ny fanadihadianay amin'ny antsipiriany. Araraoty ny fahafahanao misoratra anarana amin'ny fantsonay, avelao izahay hametraka fanontaniana ao anaty boaty fanehoan-kevitra ary amin'izay dia ho afaka hanampy anay hanohy hitondra anao ity karazana atiny ity, Naharesy lahatra anao ve izy ireo? azonao atao ny mividy azy ireo amin'ny vidiny tena mahaliana amin'ny Amazon.
1 Fitaovana sy famolavolana: Functional sy fanoherana
2 Toetra mampiavaka ny teknika sy ny feo
3 Fahaleovan-tena sy haavon'ny fifandraisana
4 Kalitaon'ny feo sy fampiharana Jabra Sound +
Fitaovana sy famolavolana: Functional sy fanoherana
Miresaka headphones an-tsofina TWS misy famolavolana somary hafa isika, ampahany voafintina, tsy misy elongation ety ivelany, ary miorina amin'ny pad izay tafiditra ao anaty sofina ny fanohanany. Mety tsara izy ireo, ary toa tsy tafiditra amin'ny fitsapana fanatanjahan-tena ataontsika, fa noho izany dia tsy maintsy omenao ny ondana izay mifanaraka amin'ny sofinao manokana. Kely dia kely ny lanjan'izy ireo, manodidina ny 5,5 grama isaky ny earphone, misy refy voafintina. Raha ny marina, raha jerena ny plastika matte dia mety hieritreritra isika fa ara-drariny ny kalitao, zavatra iray tena lavitra ny zava-misy, toa vokatra mahatohitra amin'ny fanandramana ataontsika izany ary ankamamiana ny fahazavana azy io rehefa maharitra ny fampiasantsika.
Lanja boaty shit: 35 grama
Milanja isaky ny sofina: 5,5 grama
Haben'ny boaty: 62.4 x 19.4 x 16.2 mm
Loko: Mainty, fotsy ary volamena
Raha ny momba ilay tranga, endrika lava sy mahitsizoro miaraka amin'ny fiolahana be dia be ny lanjany Gramin'ny 35 ary misy tondro, ary koa seranan-tsambo USB-C ao aoriana. Izy io dia mahatohitra tsara, fikitika mahafinaritra ary famoronana izay manome antsika fahatsapana kalitao. Tsy tokony hadinontsika fa ireo headphones ireo dia voamarina IP55, Na dia tsy rendrika aza izy ireo, ity fanasokajiana ity dia hiantoka antsika farafaharatsiny mba afaka manao fanatanjahan-tena tsy matahotra ny hijaly noho ny hatsembohana na ny sporadic splashes.
Toetra mampiavaka ny teknika sy ny feo
Manomboka amin'ny zava-dehibe isika, ny feo, manana ny bandwidth an'ny mpandahateny izahay 20 Hz hatramin'ny 20 kHz ho an'ny mpandahateny rehefa milalao mozika ary 100 Hz ka hatramin'ny 8 kHz raha misy antso an-tariby. Ho an'ity, manolotra mpamily ho antsika isaky ny earphone 6mm manana hery ampy, ary hiaraka amin'ny mikrôfona MEMS efatra izany dia hanampy antsika hanolotra antso mazava. Raha te hahafantatra ny fandrenesana antso an-tariby ianao dia azonao atao ny mijery ilay horonantsary, izay anaovantsika fitsapana mikrô, raha fintinina smiaro tsara ary manao antso miaraka amin'izy ireo, mihevitra fa miaro amin'ny rivotra izy ireo, dia azo ekena.
Tsy manana fanafoanana ny tabataba isika, manana ny fanafoanana ny tabataba izay velomina amin'ny endrika fonosana ary izany dia miankina betsaka amin'ny fomba anaovantsika azy ireo. Ho an'ity, araka ny efa nolazainay teo aloha, dia nampiasainay ny takelaka misy habe samihafa. Ny fanafoanana ny tabataba dia nahomby tokoa, nanehoana fa niasa tamin'ity lafiny ity izy ireo ary mihoatra ny ampy ny fikirakirana ny fitateram-bahoaka isan'andro nefa tsy misy fametahana be loatra.
Fahaleovan-tena sy haavon'ny fifandraisana
Mikasika ny batterie dia tsy manana angon-drakitra manokana momba ny mAh izay tantanan'ny headset tsirairay ary koa ny tranga famahana manokana. Eny, tsy maintsy asongadinay fa ny fototra ambany amin'ny tranga fiampangana dia misy mifanentana amin'ny famandrihana tsy misy tariby miaraka amin'ny fenitra Qi. Ho azy, izyNy fiampangana haingana dia hahafahantsika manana fizakan-tena 15 minitra ka hatramin'ny 60 minitra, maharitra adiny iray mahery kely vao hanatanterahana fiampangana feno.
Memoria fampifanarahana: fitaovana 8
sehatra: manodidina ny 10 metatra
mombamomba Bluetooth: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2
Amin'ny lafiny iray, noho ny fifandraisana Bluetooth 5.0 sy ireo mombamomba azy mifanentana, ny fizakan-tena nampanantenaina mandritra ny 7 ora dia saika narahina mafy, miovaova kely arakaraka ny habetsaky ny ambony indrindra notendrenay.
Kalitaon'ny feo sy fampiharana Jabra Sound +
Ireo karazana fampiharana ireo, raha ny marina, dia toa lanjany lehibe tena ilaina ho ahy. Amin'ny alàlan'ny Jabra Sound +, azo alaina ho an'ny iOS sy Android, dia ho azonao atao ny manamboatra masontsivana maro an'ny écouteur izay hahatonga ny fiainanao ho feno kokoa. Izahay dia mamelombelona ny HearTrhoug Mba hampihenana ny tabataban'ny rivotra, safidio ny mpanampy ny feo, ny fahafaha-mikaroka ny headphones ary ambonin'ireo fanavaozana rehetra dia hita ao amin'ny App (amin'ny horonantsarinay no ahitanao azy mihetsika).
App ho an'ny iOS> LINK
Raha ny amin'ny feo, Jabra Elite 75t Nahagaga ahy ny haavon'ny habetsaky ny volavola natolotra, izay tena manaron-tava ny tsy fisian'ny Cancionation Noise Akte. Na izany aza, ny bas dia voamarika be loatra amin'ny fitiavako, zavatra azontsika vahana amin'ny fampitoviana ny fampiharana. Amin'ny ambin'ny tonony, dia toa namboarina tsara izy ireo ary manolotra kalitao izay mifanaraka amin'ny vidin'ny vokatra.
Farany, hiresaka momba ny vidiny isika, azonao atao ny mividy azy ireo amin'ny tolotra manokana avy amin'ny € 129 amin'ny teboka mahazatra amidy toa an'i Amazon na tranokalan'i Jabra. Efa fantatrao fa manolotra ny sandam-bola tsara indrindra foana izahay. Amin'ity tranga ity dia manana headphones ianao amin'ny vidiny somary lafo amin'ny fikajiana ireo fampiasa, fa miaraka amin'ny antoka izay hikarakaran'i Jabra, ekena eran'izao tontolo izao noho io karazana vokatra io. Na izany aza, rehefa dinihina ny fotoana naharetan'izy ireo teny an-tsena, azonao atao ny misafidy safidy hafa manana sandam-bola tsaratsara kokoa na koa amin'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika.
Navoaka tamin'ny: Diaben'ny 27 tamin'ny 2021
Fanovana farany: Diaben'ny 26 tamin'ny 2021
Fampiharana tena mahomby
Volavola Premium sy fahatsapana
Tsy misy ANC
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Jabra Elite 75t, famakafakana vokatra tena boribory